Fiainan-tsy hita - Wikipedia
Ny fiainan-tsy hita na toeran'ny maty dia toerana misy ny olona na ny zava-manana aina hafa aorian'ny fahafatesanan araka ny finoana sy ny fivavahana sasany. Amin'ny heviny mifintina dia toerana anasaziana mandrakizay ny olona voaozona ny fiainan-tsy hita (ka atao hoe helo na afobe koa).
Ny foto-pampianarana sy ny tenim-pinoana ao amin'ireo fivavahana mônôteista momba ny fisian'ny fiainan-tsy hita dia nateraky ny foto-kevitra mitaky ny fanamarinana ny fahamarinan' Andriamanitra amin'ny fitsarana, izay misy ifandraisany amin'ny fahatsapan'ny olona ny fisian'ny asa sy toetra ratsy izay tsy ampy sazy nandritra ny fiainan'izay nanatanteraka izany asa ratsy izany na nanana izany toetra ratsy izany.
Niely tamin'ny Andro Taloha sady hita amin'ny ankamaroan'ny fivavahana eto amin'izao tontolo izao ny finoana ny fiainan-tsy hita. Ny famaritana ny fiainan-tsy hita dia miovaova arakaraka ny fivavahana ary indraindray anaovana fivoasana samihafa ao amin' ny fivavahana iray. Ao amin' ny bodisma , ohatra, dia toetran' ny fanahin' ny olona itambesaran' ny faniriana sy ny fahamaizam-po ny fiainan-tsy hita.
2 Fiainan-tsy hita araka ny Baiboly
2.1 Ny teny hoe Fiainan-tsi-hita ao amin'ny Baiboly prôtestanta amin'ny teny malagasy
2.2 Ny teny hoe Fitoeran'ny maty na Afobe ao amin'ny Baiboly katôlika amin'ny teny malagasy
2.2.1 Andalana ahitana ny hoe "afobe":
2.2.2 Andalana ahitana ny hoe "fitoeran'ny maty":
2.2.3 Andalana ahitana ny hoe "Fonenan'ny maty":
2.3 Andalana tsy ahitana mivantana ny teny hoe fiainan-tsy hita ao amin'ny Baiboly prôtestanta amin'ny teny malagasy
2.4 Andalana tsy ahitana mivantana ny teny hoe Afobe na Fitoeran'ny maty ao amin'ny Baiboly katôlika amin'ny teny malagasy
3 Fanamafisana ao amin'ny fiekem-pinoana kristiana
3.1 Ny fiainan-tsy hita na fitoeran'ny maty ao amin'ny Fiekem-pinoana apostolika
Ny teny hoe fiainan-tsy hita na toeran'ny maty dia nandikana ao amin'ny Baiboly malagasy ny teny latina hoe infernus izay midika ara-bakiteny hoe "izay ao ambany". Ny teny hoe helo kosa dia fanagasiana ny teny anglisy hoe hell izay mitovy dika amin'ny teny latina hoe infernus.
Fiainan-tsy hita araka ny BaibolyHanova
Ao amin'ny Hadesin'ny fedràn' ny kolontsaina grika sy rômana no itoeran'ny fanahin'ny olona maty ka ny andriamanitra Plotô no mpanapaka ao. Mampiasa ny teny hoe Hadesy ny Testamenta Vaovao hanondroany ny fonenana na ny toetran'ny maty. Amin'ny andalan-tsoratra sasany dia toa maneho toerana sady tsy soa tsy ratsy izay iandrasan'ny maty ny fahafatesana, ny fandevenana, ary ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty ny Hadesy. Maro ny andalana ao amin'ny Testamenta Vaovao no azo anatsoahana hevitra fa nidina tany amin'izany fanjakan'ny maty izany i Kristy, mba hitondra ny olo-marina ho any any amin'ny Lanitra na noho ny antony hafa, arakaraka ny fivoasana teolojika. Misy andalana hafa ao amin'ny Testamenta Vaovao izay azo anatsoahana hevitra fa toeram-pijaliana ho an'ireo olon-tsy marina izany, ka izany dia mitarika ho amin'ny fiheverana fa mety misaraka roa miavaka tsara izany toerana izany.
Ny teny hoe Fiainan-tsi-hita ao amin'ny Baiboly prôtestanta amin'ny teny malagasyHanova
Izao ny andalana ao amin'ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy ahitana ny teny hoe "fiainan-tsi-hita":
Matio16.18: "Ary Izaho milaza aminao koa: Hianao no Petera, ary ambonin' ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako; ary ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita tsy haharesy azy". (Ny Baiboly)
Lioka 10.15: "Ary ianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Haetry hatrany amin'ny fiainan-tsi-hita ianao." (Ny Baiboly)
Lioka 16.23: "ary raha nijaly tao amin'ny fiainan-tsi-hita izy ka niandrandra, dia nahita an'i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany." (Ny Baiboly)
Asan'ny Apostoly 2.26-27: "Ny nofoko koa hitoetra amin'ny fanantenana; Fa tsy ho foinao ho any amin'ny fiainan-tsi-hita ny aiko; Ary tsy hamela ny Iray Masinao ho tratry ny lò Hianao" (Ny Baiboly).
Asan'ny Apostoly 2.31: "koa raha nahita rahateo izy, dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainan-tsi-hitaIzy, ary ny nofony tsy tratry ny lò." (Ny Baiboly)
Apokalipsy 1.18: "dia Ilay velona; efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita." (Ny Baiboly)
Apokalipsy 6.8: "Ary hitako fa, indro, nisy soavaly hatsatra, ary ny anaran'izay nitaingina ary atao hoe Fahafatesana, ary ny Fiainan-tsi-hita nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibi-dia etỳ an-tany." (Ny Baiboly)
Apokalipsy 20.14: "Ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny farihy afo." (Ny Baiboly)
Ny teny hoe Fitoeran'ny maty na Afobe ao amin'ny Baiboly katôlika amin'ny teny malagasyHanova
Ao amin'ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy edisiona tamin'ny taona 1938 dia tsy teny na andian-teny tokana no andikana izay ataon'ny Protestanta hoe "fiainan-tsi-hita" na "fiainan-tsy hita", fa indraindray "afobe", indraindray "fitoeran'ny maty" ary indraindray "fonenan'ny maty".
Andalana ahitana ny hoe "afobe":Hanova
Andalana ahitana ny hoe "fitoeran'ny maty":Hanova
Asan'ny Apostoly 2.26-27: "Noho izany, ny foko miravoravo, ny lelako mirobiroby, ary ny nofoko hitombina amin' ny fanantenana,fa tsy ho foinao ao amin' ny fitoeran' ny maty ny aiko, ary tsy hatolotrao hafoy ho tratry ny lò ny Masinao." (Ny Baiboly Masina)
Andalana ahitana ny hoe "Fonenan'ny maty":Hanova
Andalana tsy ahitana mivantana ny teny hoe fiainan-tsy hita ao amin'ny Baiboly prôtestanta amin'ny teny malagasyHanova
Na dia tsy ahitana ny teny hoe "fiainan-tsy hita" aza ireto andalana manaraka ireto dia mihevitra ny teolojiana maro fa mampiasa teny mitovy hevitra amin'ny hoe "fiainan-tsy hita" izy ireo.
1Petera 3.19–20: "19 izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina, 20 dia izay tsy nanaiky fahiny, fony niandry ny fahari-pon'Andriamanitra tamin'ny andron'i Noa, raha mbola namboarina ny sambo-fiara, izay nidiran'ny olona vitsy, dia izy valo mianaka, ka dia namonjena azy ny rano," (Ny Baiboly). Amin'ny teny grika dia izao no voasoratra: "ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν, ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε…."
Efesiana 4.7-10 "7 Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. 8 Koa izany no ilazany hoe: Raha niakatra ho any amin'ny avo Izy, dia nitondra olona maro ho babo Ka nanome fanomezana ho an'ny olona (Sal. 68. 18). 9 (Ary ny amin'ny hoe niakatra, inona moa izany, afa-tsy ny efa nidina ho any ambanin'ny tany koa? 10 Izay nidina, dia Izy koa no Ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra, hamenoany ny zavatra rehetra.)" (Ny Baiboly). Amin'ny teny grika dia izao no voasoratra: διὸ λέγει, ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα [μέρη] τῆς γῆς; ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.
Ny andininy faha-8 dia fanapahana ny famerenan-teny naitatra avy tamin'ny Salamo 68.18, misy fiovana fijery: "Efa niakatra ho any amin'ny avo Hianao ka mitondra babo; efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona Hianao - eny, teo amin'ny maditra aza,- mba hitoeran'i Jehovah Andriamanitra any." Ny andininy anaty fonosana (Efes 9-10) dia fanazavana famakafakana ny lahatsoratra. Ny teny nadika hoe "ambanin'ny tany" (endrinka fampitahana: τὰ κατώτερα / ta katôtera) dia mitovy amin'ny teny hoe "fiainan-tsy hita" ao amin'ny dikan-teny grikan'ny Fanekem-pinoana apostolika (ny endrika soperlativa: τὰ κατώτατα / ta katôtata).
Filipiana 2.9-10: "9 Koa izany no nanandratan'Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, 10 mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handohalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany," (Ny Baiboly). Manondro ny fahefana sy ny herin'i Jesoa amin'i Satana ity andalana manana endrika kanto ity, ka tsy midika fa any ambanin'ny tany ny Sheol.
Romana 10.6-8: "6 Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe: Aza milaza ao am-ponao hoe; Iza no hiakatra any an-danitra? (dia ny hampidina an'i Kristy izany,) 7 na: Iza no hidina any amin'ny lalina? (dia ny hampiakatra an'i Kristy avy any amin'ny maty izany.) 8 Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny, dia eo am-bavanao sy ao am-ponao (Deo. 30. 12-14), dia ny teny ny amin'ny finoana, izay torinay" (Ny Baiboly). Manondro ny fidinana any amin'ny lalina sady mifangarika amin'ny fiakarana any an-danitra io andalana io.
Ireo andininy ireo dia miresaka ny amin'ny asan'i Kristy noho izy nanao ny asa rehetra tokony hatao, dia ny fidinana any amin'ny lalina sy ny fiakarana any an-danitra, izay feno sy ampy hoan'ny olona rehetra mino azy. Izany famonjena izany dia azo amin'ny alalan'ny finoana ny teny torina, ka tsy mila fananteran'ny olona an'izany ho an'ny tenany.
Andalana tsy ahitana mivantana ny teny hoe Afobe na Fitoeran'ny maty ao amin'ny Baiboly katôlika amin'ny teny malagasyHanova
Na dia tsy ahitana ny teny hoe "afobe" na "fitoeran'ny maty" aza ireto andalana manaraka ireto dia mihevitra ny teolojiana maro fa mampiasa teny mitovy hevitra amin'ny hoe "afobe" na "fitoeran'ny maty" izy ireo.
Fanamafisana ao amin'ny fiekem-pinoana kristianaHanova
Ny Fanekem-pinoana apostolika na Sembolinny Apostoly sy ny Fanekem-pinoana atanaziana na Sembolin'i Atanazy (ilay atao hoe Quicumque Vult) dia milaza io fidinana any amin'ny fiainan-tsy hita na fonenan'ny maty io, fa ny Fanekem-pinoana nikeana dia tsy ahitana izany fa milaza fotsiny fa nalevina i Kristy.
Ny fiainan-tsy hita na fitoeran'ny maty ao amin'ny Fiekem-pinoana apostolikaHanova
(...) ary mino an’i Jesoa Kristy, (...) nidina tany amin’ny fiainan-tsy hita (...) (Dikan-teny malagasy FJKM).
(...) Ary mino an’i Jesosy Kristy, (...) nidina tany amin’ny fiainan-tsi-hita (...). (Dikan-teny malagasy loterana)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiainan-tsy_hita&oldid=995079"
Dernière modification le 27 Jolay 2020, à 07:21
Voaova farany tamin'ny 27 Jolay 2020 amin'ny 07:21 ity pejy ity.